राजा र लोकतन्त्र विलोमभन्दा परिपूरक « Nepali Digital Newspaper
राजा र लोकतन्त्र विलोमभन्दा परिपूरक
१५ पुष २०७८, बिहीबार ०३:०५
झण्डै डेढ दशकदेखि विभिन्न साना-साना समुहमा राजावादीहरू सडकमा नाटक देखाउँछन् । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म तिनीहरूको भाषण उही नै छ, सबै कण्ठै हुने गरेर । केही जनता जम्मा गऱ्यो अनि आसन र भाषणको राशन पस्कियो चर्का कुरा गऱ्यो । एकले अर्कालाई पानी पिउँदै गाली गऱ्यो अनि ठूलो काम गरेको दम्भ पाल्यो । यो ती राजावादीको चरित्र भएको छ ।
लोकतन्त्र र राजतन्त्रलाई एकअर्काको विरोधीको रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो सर्वथा झुटो कुरा हो । चाहे बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहले विराज बखतीलाई मनपराए पनि जनताको इच्छाको सम्मान गर्दै कालु पाण्डेलाई सुम्पेको कज्याइँ (सो बेलाको प्रधानमन्त्री) होस् । चार हजारभन्दा ज्यादा एकाई र प्रत्येक एकाईबाट कम्तिमा ११ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई शासन व्यवस्थामा भागिदारी गराउनु लोकतन्त्र नभए के थियो ? कुल जनसंख्या ५६ लाख भएको अवस्थामा मुलकको कुना-कुनाबाट ४४ हजार भन्दा धेरैको शासनमा प्रत्यक्ष भागिदारीलाई राजाका आसेपासे मान्ने हो केही अपवादबाहेक मुलुक नै राजाको आसेपासे भएको मान्नु पर्दछ ।
व्यवस्थामा भाग लिनेलाई आजको आसेपासे भन्ने हो भने जित्ने ४४ हजार भन्दा धेरै हार्ने पनि एक जना गरेर दुई मात्र उम्मेदवार मान्दा त्यति नै अर्थात् ५६ लाखमा झण्डै एक लाख त राजाका आसेपासे कार्यकर्ता नै मान्नुपर्छ । कुल जनसङ्ख्याको झण्डै २ प्रतिशत जनताले निर्वाध भाग लिएको व्यवस्था भन्दा ठूलो लोकतन्त्र अरु कुन होला ? फेरि यिनीहरू कसैको ह्विपको अधीन नभइ विवेकले देखेको गर्न स्वतन्त्र थिए । पछि त प्रत्येक इकाईमा कम्तीमा ५४ जना जनप्रतिनिधि पुगे । जब यति विशाल जनसहभागिता ठूलो लोकतन्त्र कि टाउको गनेर नेताहरूले बहुमत, या दुई तिहाइको दम्भ देखाउन पाउने ठूलो ।
आफूअनुकुल हुँदा संसद्को सर्वोच्चता र आफूप्रतिकुल हुँदा संसद्को अधिकार केवल सुझाव दिने मात्र हो भन्ने पिपलपाते नेताहरू आफै लोकतन्त्रको परिभाषा जान्दैनन् भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । जनताको रगत-पसिना निचोरेर जम्मा गरेको राजश्व आफुखुशी बक्सिस दिने, योग्यताले भन्दा चाकरीले नियुक्ति दिने परिपाटी मौलाउँदैछ । त्यस कृपाको सूचीमा पर्न हुन्छ हजुर, हस हजुर, हजुर त संसारमा सबैभन्दा ठूलो भनेर विरुदावली गाउनेहरूको जमातले भने यो कुरा मान्दैन । भित्री मनले माने पनि प्रकटमा वफादारी देखाएर लाभ लिनु उनीहरूको लक्ष्य हो । तर राजावादी भनाउनेहरूलाई कुन कुराले लोकतन्त्रको परिपुरक तथा संरक्षक नेपालको राजसंस्थालाई लोकतन्त्रको विपरीत तानाशाह देख्ने बनाएको छ ?
नेपालको राजसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सनातनी हुन्, चल्तीको भाषामा हिन्दुधर्मालम्बी हुन् । तर नेपालको राजसंस्थाले नेपाललाई कहिले हिन्दुमात्रको भनेन र त्यसअनुसार व्यवहार पनि गरेन । छिमेकमा मुगलहरूले धमाधम मन्दिरलाई मस्जिदमा परिवर्तन गरे, जजिया कर लगाए । तर नेपालमा भने राजदरबारको दृष्यपटलमा नै मस्जिद छ । विभिन्न स्थानमा चर्चहरू पनि खोल्न दिइएका छन् । यो राजाको सक्रिय शासनकालको कुरा हो, तर त्यसबेला हरेक धर्म-सम्प्रदायलाई सामाजिक सद्भावमा खलल पार्न दिइएको थिएन । राजाद्वारा प्रदत्त संविधानमा भनिएको हिन्दूराष्ट्रको व्यवहारिक रूप यही थियो । जो अझै पनि घेरैको स्मृतिपटलमा ताजै छ ।
जातिय, क्षेत्रिय सन्तुलन कुनै रडाको नै नगरी र आपसी वैमनश्यता हुन नै नदिई कायम गरिएको थियो । त्यसबेलाका नियुक्ति, प्रतिनिधित्व आदिको सूचि हेर्ने हो भने यो प्रष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्को विषेशता समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व हो । त्यसको वर्तमान अवस्था र पहिलेको अवस्था तुलना गर्दा पनि यो विषेशता वर्तमानभन्दा कम थिएन बरु बेसी नै थियो । बरु वर्तमानमा रडाको नगरी यो प्राप्त नभएका कयौँ उदाहरण पाइन्छन् । के राजावादीहरूले यो देखेका वा महसूस गरेका छैनन् र ? छन् भने किन विरोधिले लगाएको राजा लोकतन्त्रविरोधि भन्ने आरोप जस्ताकोतस्तै स्विकार गर्छन् ?
झण्डै डेढ दशकदेखि विभिन्न साना-साना समुहमा राजावादीहरू सडकमा नाटक देखाउँछन् । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म तिनीहरूको भाषण उही नै छ, सबै कण्ठै हुने गरेर । केही जनता जम्मा गऱ्यो अनि आसन र भाषणको राशन पस्कियो चर्का कुरा गऱ्यो । एकले अर्कालाई पानी पिउँदै गाली गऱ्यो अनि ठूलो काम गरेको दम्भ पाल्यो । यो ती राजावादीको चरित्र भएको छ । अनि गुनासो गर्छन्, विभिन्न माध्यममा देखापर्नेहरू किन आफ्नो कार्यक्रममा समावेश भएनन् ? ती हिम्मतहारा, हुतिहारा अवसरवादी हुन् नत्र हाम्रो कार्यक्रममा आइहाल्थे नि ! यो घृणापुराण सुन्न को आउने र, किन आउने ? पहिले ती राजावादीहरूले यो प्रश्नको उत्तर दिनु पर्दछ । राजसंस्था लोकतन्त्रविरोधि हैन एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्न राजावादी हिचकिचाउनु हुन्न । अनि हिन्दूराष्ट्रको नाममा यो मुलुक र राजा केवल हिन्दुको हो भन्ने गलत भावना फैलाउन बन्द गर्नुपर्छ ।